Ibala lePerimeter Series P10 Ngaphandle kwibhola ekhatywayo yokubonisa i-LED
Uhlobo lweMveliso: P10
Izinto: Intsimbi / Intsimbi
Izicelo: Isaziso seMultimedia
Ubukhulu: Ububanzi: 960mmx960mm
Ibala lemidlalo lePerimeter Series P10 yangaphandle Ibhola yeBhola yokuBonisa kweScreen Iimpawu: 1. Uyilo olutsha lwemaski ethambileyo. Uhlaziyo oluphezulu kunye nenkcazo ephezulu. 2.I-IP65 engenawo amanzi, Yeyiphi ephezulu yokusebenza okungangeni manzi, i-dustproo
1. Uyilo olutsha lwe-mask ethambileyo. Uhlaziyo oluphezulu kunye nenkcazo ephezulu.
2. IP65 engenamanzi, Esebenza ngokungena manzi, ukungabinathuli kunye nokulwa nerusi.
3. Ingasebenza kakuhle kuzo zonke iintlobo zemozulu enzima yangaphandle, kwaye ikwalungele iiholo zomthambo zangaphakathi.
4. Iiphaneli zamkela i-Angle yoyilo oluhlengahlengisiweyo, olunokuthi luhlengahlengiswe ngokwahlukeneyo I-Angle (75 ° ~ 90 °) ngokwengelosi yokusetyenziswa kweemfuno, vumela bonke abaphulaphuli babone umxholo wosasazo ngqo okanye ufakelo.
Ukukhuselwa okukhethekileyo okungangeni manzi kunye nokusasaza ubushushu, kunokufakwa ngaphakathi nangaphandle. Inqanaba eliphezulu le-IP lokukhusela i-IP65 liqinisekisa ukubonelela ngemveliso esemgangathweni kuyo nayiphi na imeko.
Grade 2.Industrial ukhuseleko, IP65 ubungqina othuli kunye manzi.
Umboniso wamkela i-IP65 iqokobhe elingenamvula kunye nothuli ngasemva, inaliti yonyango yerabha engenamanzi kunye nesikrufu esisigxina somzimba wesikrini, ukusebenza ngokugqibeleleyo kunye nohlolo olucwangcisiweyo lokuqinisekisa umgangatho wemveliso.
3.Seamless usifake ufakelo Flexible
Useto olungenamthungo nolungenasiphene, umsantsa ohlengahlengiswayo, ufakelo oluguquguqukayo Itekhnoloji yokwandiswa kwevidiyo ingasetyenziselwa nabuphi na ubungakanani ukuqinisekisa ukuba umfanekiso awukhubazekanga kwaye umfanekiso ucacile kwaye uqaqambile.
● Itekhnoloji yeSMD
● I-angle yokujonga ngokubanzi (140 * / 140 °)
● Ulwahlulo oluphezulu
● IP65 engenamanzi
● Ukusebenza ngokuzinzileyo ngaphandle
I-238sqm P10 Ibhola yeBhola yeBhola ekhatywayo ye-LED e-Ivory Coast